ब्वायफ्रेण्डलाई पठाएको आफ्नै नग्न तस्वीर बाउको मोबाइलमा गएपछि ! – Complete Nepali News Portal
November 15, 2017	2,122 Views
काठमाडौं । सायद यस्तो क्षण जिन्दगीकै सबैभन्दा लज्जाजनक तथा अप्ठेरो क्षण हुन्छ होला । निकै गोप्य, अश्लील तथा आफ्नै पार्टनरका लागि लक्षित गरिएका चिजहरु अन्य व्यक्ति अझ आफ्नै बाउआमाको साथमा पुगे भने त्यसपछि छोराछोरीको हालत के होला रु छोराछेरीको त्यस्तो कृत्य देख्दा बाउआमाको प्रतिक्रिया के होला र ?
आफ्नै केटा साथीका लागि मोबाइलबाट पठाएको आफ्नो नांगो तस्वीर यदि भुलबस बुवाको मोबाइलमा गयो भने परिणाम के होला रु यस्तै भोगेकी छिन् एकजना युवतीले । आफ्नो नाम तथा वतन नखुलाएकी ती युवतीले ट्विटर मार्फत यो भयावह क्षणको खुलासा गरिन् । थप भिडियोमा हेर्नुहोस